Tag: sioka | Martech Zone
Betsaka ny tabataba ao amin'ny media sosialy ka sarotra indraindray ny manaraka. Tiako ny zava-misy fa manana mpanaraka marobe amin'ny Internet aho ary manandrana mandray anjara sy mamaly izay rehetra mangataka. Rehefa orinasa nifandraisako teo aloha dia manokana fotoana aho ary mamaly mifanaraka amin'izany. Izany dia nilaza fa misy paikady mahatsiravina manomboka ny fisongadinana an-tserasera izay mandany ny fotoako amin'ny hafatra mivantana ary
Taratasy misokatra ho an'i @Jack Momba ny Twitter
Zoma, Febroary 10, 2017 Alahady 12 Febroary 2017 Douglas Karr
Ry Jack malala, nandritra ny herintaona izao dia nihomehy aho fa ny Twitter dia toy ilay zazavavy tiako indrindra tany am-pianarana izay tsy hanome ahy ny ora antoandro. Indray mandeha nilalao ny tavoahangy tao amin'ny lakaly izahay, ary natsoiny ilay tavoahangy hanoroka ilay lehilahy teo akaikiko izay olona maditra. Notorotoroiny ny foko. Ary tapaka ihany izy tamin'ny farany. Samy resy isika roa. Very koa ny Twitter. Nanoratra tamin'ny vola azonao ianao
Zoma, Desambra 4, 2015 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Mbola aloha loatra dia hiantso ny fahafatesan'ny Twitter, na dia tsapako manokana aza fa manohy manao fanavaozana izay tsy manatsara ny sehatra izy ireo. Vao tsy ela izay dia nesorin'izy ireo ny isa azo jerena amin'ny alàlan'ny bokotra sosialy amin'ny tranokala. Tsy azoko an-tsaina ny antony ary hita fa mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny firosoana amin'ny ankapobeny izany raha mijery ny fivezivezena Twitter amin'ny tranokala fandrefesana lehibe ianao. Ampy izay ny fitarainana… andao jerena ny tsara